ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म महासचिवमा उठ्छुः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (अन्तरवार्ता) - Dainik Online Dainik Online
ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म महासचिवमा उठ्छुः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (अन्तरवार्ता)
प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहिबार ४ : ५४
महाधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ?
एमालेले सबैतिर सर्वसम्मत गर्दै महाधिवेशनको मुखमा पुगेको छ, केन्द्रीय समिति पनि सर्वसम्मत हुने हो?
पार्टी एकीकरणपछि तपाईं गण्डकी इन्चार्ज हुनुभयो । गण्डकीबाट केन्द्रीय समिति यसअघि खासै राम्रो उपस्थिति छैन, अहिले के तयारी छ?
तपाईंको उम्मेदवारी चाहिँ केमा हुनेछ?
महासचिवमा धेरैजना दाबेदार हुनुहुन्छ नि, जितिन्छ चुनाव?
तपाईं सहमतिमा हुँदा अरु पदमा जान सक्ने भन्नुभयो, महासचिवमा तपाईंले सघाउने र उपयुक्त उम्मेदवार चाहिँ को हो?
ओलीसँग अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु कोही नेता एमालेमा छैन?
केपी ओलीकै कारण तपाईं मुख्यमन्त्रीबाट च्यूत हुनुपर्‍यो । उनैको पक्षमा यतिसम्म खुलेर किन लाग्नुभएको?
मिलाउने प्रक्रिया हुँदा माओवादी केन्द्र र १० बुँदेपछि एकतामै रहेकालाई कसरी मिलाउनु हुन्छ?
एमालेबाट अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, माओवादीको नेतृत्व कसले गर्ने र एमालेमा रहेका माधव पक्ष भनिएकाहरूको नेतृत्व कसले गर्छ?